Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Faransiiska Olivier Giroud Sheekooyinka Hore ee Sheeko-xannuunsanaha
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan oo loo yaqaan 'Nickname'; "Weeraryahan Charm". Dabeecada Olivier Giroud Caruurta iyo wargeysyada aan la isku qorin Xaqiiqooyinka waxay kuugu keenayaan xisaab buuxa oo dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, nolosha qoyska iyo kuwo badan oo OFF iyo ON-Pitch xaqiiqda yar ee la yaqaan ee ku saabsan isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay kartidiisa, hase yeeshee dadka yaryar waxa ay tixgeliyaan Olivier Giroud Biography kaasoo aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, u ogolow.
Olivier Giroud Sheeko dhalinyaro sheeko xeeldheer Xogta loo yaqaan 'Nolosha Hore
Olivier Giroud wuxuu ku dhashay maalintii 30th ee September 1986 ee Chambéry, koonfurta bari ee Faransiiska.
Tan iyo markii uu caruurnimadiisii ​​(xaq udhigay da '6), wuxuu noqday kubadsameeyaha kubada cagta kubada cagta oo uu ugu mahad celiyay walaalkiis weyn Romain Giroud oo ah sanadka 10.
Olivier ayaa la isku dayay inuu ka badbaado fashilka xitaa ka hor inta uusan bilaabin xirfadiisa. Tani waxay dhacdey markii uu arkayay in uu si kama dambeys ah u soo afjarmay shaqada walaalkiis. Walaalkiis ayaa go'aansaday inuu joojiyo kubada cagta si uu u noqdo nafaqeeye. Roomaanku wuxuu waalidkiisa ka niyad-jabay sidii uu ku guuldareystay inuu tusaale wanaagsan sameeyo.
Marka laga reebo cabsida shaqada, Olivier yar ayaa sidoo kale ka baqday dabeecadda xNUMXs 'Alf' markii uu ahaa dhalinyaro. Mar uu ka hadlayay sida uu walaalihiisa waayeelka ah u isticmaali jiray inuu si joogta ah uga careysiiyo cabsida uu ka qabo xiddigaha ugu caansan adduunka.
Inkastoo Alf oo saaxiibtinimo, wiil dhalinyaro ah oo Olivier uusan xiiseyneynin dabeecadda xannaaneynta ee abuurtay.
Markii la weydiiyay waxa uu ka baqdiyay, Giroud wuxuu yiri: 'Walaalkey waxaa loo isticmaali jiray in lagu ixtiraamo dabeecada TV-ga caruurta oo lagu magacaabo Alf. Aad baan uga baqayay isaga sababtoo ah wuxuu ahaa mid fool xun. Walaalkay ayaa u sheegi jiray, "Iska ilaali, Alf wuxuu kaa doonayaa inuu caawa kuu soo qaado! ' Waxa uu aad uga fogaaday!
Ka dib talooyin dhiirogelin ah ka dib, dhalinyarada Olivier ayaa go'aansaday in ay kubada isku dayaan. Tani waxa uu sameeyay si ay u keento ammaanta lumay dib ugu soo laabtay gurigiisii ​​oo mar horeba la tixgeliyey "Qoyska kubada cagta"
Olivier Giroud Sheeko dhalinyaro sheeko xeeldheer Xogta loo yaqaan 'Xirfadda Soo-koobista
Olivier Giroud ayaa ku kicitimay tuulada u dhow ee Froges, oo u dhow Grenoble. Wuxuu bilaabay mustaqbalkiisa kubada cagta inuu u ciyaaro naadigiisa, Olympique Club de Froges.
Waxa uu lix sano tababarka ku qaatay kooxda ka hor inta uusan ku biirin kooxda Grenoble ee da'diisu tahay 13.
Markay arkeen waxa ku dhacay Romain, waxaana loo diray amaahda Istres seddexaad oo isku xigta, waxa ay aheyd gadaal markii ay kooxdiisu iibisay iibkeeda, isaga oo sheegay inuusan haysan tayada ay u ciyaaraan kooxda.
Olivier Giroud aad ayuu u baqay. In uu erayada .... "Waa inaan halis galiyaa inaan dib ugu soo laabto horyaalka hoose," ayuu yiri. "Laakiin waligeey ma aanan bixin."
Olivier wuxuu isku qabsaday xanuunka wuxuuna ka dhigay qayb ka mid ah sharaftiisa iyo alaabtiisa. Isagu wuu isdhaafsaday.
Kadib wuxuu ku biiray Tours in 2008. Xilli ciyaareedkiisii ​​labaad ee Tours, wuxuu ahaa gooldhaliyaha ugu sareeya ee goolasha ee 21. isaga oo u dhaqaaqay kooxda Montpellier.
Giroud ayaa mar kale ahaa gooldhaliyaha ugu sareeya goolasha 21 xilli ciyaareedkii 2011-12, isagoo kooxda siinaya horyaalkoodii ugu horeeyay ee Ligue 1 ka hor inta uusan u dhaqaaqin Arsenal. Inta kale ee ay had iyo jeer ku dheheen, waxay caddeeyeen hanoowgooda guriga.
Olivier Giroud Sheeko dhalinyaro sheeko xeeldheer Xogta loo yaqaan 'Nolosha Qoyska
Warbixinnada ayaa muujinaya in Olivier Giroud uu ka yimid celcelis qoys qoyskiisa. Wax yar ayaa laga yaqaanaa aabihiis iyo hooyadiis maadaama ay go'aansadeen in ay gabi ahaanba ka fogaadaan warbaahinta.
Gabar: Sidii hore loo sheegay, Olivier wuxuu leeyahay walaalo weyn, Romain, oo sidoo kale ahaa ciyaaryahan. Wuxuu ku ciyaaray akadeemiga Auxerre wuxuuna matalay France oo ka hoos maray 15 iyo heerka hoose ee 17, oo la barbar ciyaara ciyaartoy sida Thierry Henry, David Trezeguet iyo Nicolas Anelka, laakiin waxa uu dhammaaday inuu sii wato xirfad shaqo oo mustaqbalka ah si uu wax u barto una noqdo nafaqeeye.
Olivier ayaa dib u xusuustaa. "Waxaa loo tababaray Auxerre, wuxuu ahaa rajo, laakiin marnaba xirfad xirfadeed". Romain ayaa dib ugu soo laabtay waxbarashada, waxana uu noqday nafaqeeye.
Olivier Giroud Sheeko dhalinyaro sheeko xeeldheer Xogta loo yaqaan 'Nolosha Xiriirka
Giroud wuxuu guursaday Jennifer tan iyo 2011.
Olivier Giroud iyo xaaskiisa Jennifer
Gabadhooda Jade waxay dhashay June 18, 2013.
Gabadha Olivier, Jade Giroud ayaa aabaheed u aqoonsaday inuu ogaado sida waalidku u adagtahay. Olivier Giroud oo aan marnaba u isticmaalin caruurta waxay abuurtay wakhti dheeraad ah si loo dhiirrigeliyo loona taageero taageerada jireed, caadifad, bulsho, iyo horumarka cunugiisa.
Bishii Nofeembar 2015, Olivier iyo Jennifer Giroud waxay uqaabilsan yihiin uurka Jennifer ee gogol gaduud ah oo ka mid ah Gift Gift Gala ee London. Bishii Maarso 7, 2016, Jennifer waxay dhashay dhalmo magaceeda la yidhaahdo Evan. Giroud wuxuu ujeedkiisu yahay wiilkiisa, Evan oo uu aad u jecel yahay.
Sida laga soo xigtay Oktoobar 2017, lamaanayaashu waxay filayeen ilmo saddexaad.
Olivier Giroud Sheeko dhalinyaro sheeko xeeldheer Xogta loo yaqaan 'Dhibbane
Bishii Febraayo 2014, fadeexad ayaa haysa sawirka Olivier Giroud. Waxay ku lug leedahay daabacaadda sawirada, wargeyska maalinlaha ah ee Ingiriiska The Sun. Sawirkaan waxay muujinaysaa xiriirka aan kala go 'laheyn ee Olivier Giroud iyo Celia Kay, oo ah qaabka lingerie.
Sidaas oo kale, Febraayo 2014, ayaa la sheegay inuu qirtay inuu qirtay inuu xaaskiisa ku khiyaanay qaabka Celia Kay.
Dhacdada ka dib, wuxuu ku raaligeliyay xaaskiisa, laakiin markii dambe wuxuu ku adkeystay in uusan sinaba u dhicin. Wenger ma uusan ka hadlin arinta isagoo sheegay inuu doonayo "Ixtiraamkiisa gaarka ah".
Celia Kay waxay qaadatay waqtigeeda si ay uga jawaabto naqdiyada warbaahinta bulshada.
Giroud iyo xaaskiisa labaduba way soo qabteen sababtuna ma ahan wax war ah oo ku saabsan furitaankooda.
Raheem Sterling, Edinson Cavani iyo Anthony Martial ayaa ku lug lahaa fadeexado khiyaano ah sida Olivier.
Olivier Giroud Sheeko dhalinyaro sheeko xeeldheer Xogta loo yaqaan 'Handsomeness
Giroud wuxuu leeyahay sumcad France si aad u noqotid dabeecad la mid ah oo qurux badan. 2014, wuxuu noqday wejiga Hugo Boss's Bossed Dhabarka roodhiga ragga.
Bishii Febraayo 2015 Giroud waxaa loo doortay 'Ciyaaryahanka ugu qaalisan Premier League'. Wareysi uu siiyay GQ, ayuu sheegay David Beckham sida dhiiro gelinta sida uu u egyahay, isagoo sheegay in Beckham uu yahay "Style waa astaanta".
Olivier Giroud Sheeko dhalinyaro sheeko xeeldheer Xogta loo yaqaan 'Diinta
Giroud waa kaniisad iyo wuxuu leeyahay tattoo on gacanta midig ka soo Sabtida 23 ee Latin: "Dominus waa in ay iqaabisaa aniga iyo nihil mihi deerit" ("Sayidkaygu waa adhijirkayga, mana doonayo inaan noqdo").
Wuxuu qeexayaa naftiisa sida a "Qofka aad u rumeysan [...] Anigu iskama dhex mari karo kahor inta aan ciyaarayo, laakiin wax yar ayaan ku duceynayaa qalbigayga"
Olivier Giroud Sheeko dhalinyaro sheeko xeeldheer Xogta loo yaqaan 'Isku xirka Koscielny
Giroud iyo Koscielny ayaa ku biiray kooxda Turki ee xilli ciyaareedka 2008-09. Waxay yihiin laba kooxood oo aan kala go 'lahayn oo had iyo jeer wada joogaan qolka labiska, baska, sawirrada kooxda, tababarka, teniska iyo xitaa casho. Ka dib markii uu u dhaqaaqay Arsenal, Giroud ayaa sheegay in Arsenal ay tahay koox cajiib ah oo leh tababaraha weyn ee Faransiiska, "LoLo" halkaas ayuu ku ciyaarayaa.
Koscielny waxaa sidoo kale loo yaqaannaa "Bosscielny" or "Qaybta Boss," isaga oo ka mid ah saaxiibadiisa kooxda iyo taageerayaasha.
Olivier Giroud Sheeko dhalinyaro sheeko xeeldheer Xogta loo yaqaan 'Style of Play
Giroud ayaa awood u leh inuu ciyaaro boosas badan oo weerar ah, lakiin inta badan wuxuu u ciyaaraa weeraryahan ahaan ama booska weerarka. Waxa uu sidoo kale mararka qaar loo isticmaalaa weeraryahan kale. Weeraryahan adag, wuxuu si gaar ah u yaqaanaa heerka uu goolal dhalinta ku kalsoon yahay, xajmiga, awoodiisa, saxsanaantiisa, xoojinta awoodda badan, awoodda kubada cagta ee kubada cagta ah iyo goolka isku xirka. Waxa kale oo uu la xidhiidhaa samaynta mareegaha hore ee difaacayaasha
Olivier Giroud 'laad xor ah ' wuxuu ahaa tartan loogu talagalay Hadafka 2016 / 2017.
Haddii aad dib u eegto Giroud xirfadiisa, waxaad ogaan doontaa in Giroud uu si joogta ah u ciyaaray kooxihiisii ​​hore isagoo aan wax dhaawac ah soo gaarin. Waa inaad leedahay DNA Park Ji-Sung, Dirk Kuyt iyo Ox (xayawaanka, maya Oxlade-Chamberlain) si loo sii wado heerarka jirdhiska.
Giroud oo ah xiddiga khadka dhexe ee Arsenal ayaa noqonaya taageerayaasha ugu cadcad tan iyo markii uu Gunners ku biiray 2012. Taageerooyin badan oo taageerayaal ah ayaa ku dayday qaabka timaha. Qaarkood waxay ku dhibtoodaan sida dhibka hooseeya.
Wiilka sagaal jirka ah ayaa hal mar la mamnuucay fasalka, sababtoo ah waxa uu timihiisa jaray sida Olivier Giroud.
Danny Purdy ayaa gurigeeda lagu soo diray kadib markii loo sheegay inuu gaaban yahay gadaal, gadaal iyo dhinacyo timo jimicsi qawaaniinta dugsiga.
Hooyadiis, Sarah waxay ku hanjabtay inay isaga ka baxdo Dugsiga Dhexe ee Brooklands ee Leighton Buzzard, Bedfordshire, guud ahaan. Hooyo-labo-mid ah Sarah, 33, waxay ahayd inay dugsiga weydiisato qalab si ay u barato Danny guriga ilaa inta xalka loo xalinayo.
Waxay tiri: "Waxaan si xaqiiqo ah u maleyneynin in timo sida Danny uu jabiyay xeerarka. Ilaa iyo inta ilmuhu xiro dharka dugsiga si sax ah uguna shaqeeyo dugsiga, dhab ahaantii ma arko waxa dhibaatadu tahay. Anigu hubaal kuma sugi doono, oo waxaan fiirin doonaa inay wiilkayga u dareemaan sida muuqata oo ka fogaanaya casharrada. Waxaan mar walba ku fekeray inaan maskaxda ka fekerno oo aan timaheena, laakiin si cad u aheyn. "
Si kastaba ha ahaatee, maamulaha dugsiga Steven Harrington-Williams ayaa difaacay fikirka dugsiga. Wuxuu yiri: "Waxa dhacay waxa uu ku soo galay dugsiga oo leh qayb weyn oo timaheeda ah sida Olivier Giroud. Waxay ku dhowdahay madaxa maqaarka halka inta soo hartay ay dheeraatay. Ma fileyno in nooc ka mid ah timo iskuulka. "
Danny Purdy ayaa dib loo soo celiyay ka dib markii uu xiiray timihiisii ​​Olivier Giroud iyo casharka casharka ee shuruucda timaha ee carruurta dugsiga.
Benjamin Mendy Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha